Lenovo K3 Rịba ama Nyochaa | Gam akporosis
Francisco Ruiz | | Lenovo, Nyocha
Taa, achọrọ m inye gị nyocha zuru oke nke otu n'ime ọdụ kacha mma maka uru maka ego anyị nwere etu isi nyochaa na Androidsis.com. Ọnụ ya abụghị onye ọzọ Lenovo K3 Cheta, ọnụ na si ebe a Androidsis anyi gosiputara gi n’oge ufodu na n'ikpeazụ anyị nwere ya maka ịzụta site naanị 135 Euro.
O doro anya na nke a Lenovo K3 Ọ bụghịe na-abịa dị ka nnukwu mma ọzọ na gam akporo n'etiti, nso nke na, n'ihi nkọwapụta nkọwapụta, nwere ike ịgụnye na gam akporo dị elu ebe ọ bụ na ule dị ka ewu ewu AnTuTu Benchmark, nke a na-akpali akpali ọnụ na gam akporo 5.0 nweta akara na-enweghị atụ Ihe 45334 Iguzo n'elu onu ogugu dika Samsung Galaxy S5, LG G4 ma obu idi nso na onodu ya dika Samsung Galaxy Note 4 ma obu Meizu MX4 n’onwe ya.
1 Lenovo K3 Cheta Nkọwapụta Nka na ụzụ
2 Ihe kacha mma nke Lenovo K3 Rịba ama
3 Ihe kacha njọ nke Lenovo K3 Rịba ama
4 Echiche nke Editor
5 Osisi onyonyo
Lenovo K3 Cheta Nkọwapụta Nka na ụzụ
Nkọwapụta Lenovo K3 Cheta
Nlereanya K3 Rịba ama K50-t5
Usoro njikwa gam akporo 5.0 kwalite na gam akporo 5.1
Ihuenyo 5'5 "IPS nwere mkpebi pikselụ FullHD 1920 x 1080 na nhazi akwa nhazi VibeUI
Nhazi Mediatek MTK 6752 Octa isi na 1 Ghz na 7-bit teknụzụ
Nchekwa ime 16 Gb na-enweghị nkewa ọ fọrọ nke nta 12 GB n'efu ka sistemụ na nkwado maka microSD
Igwe n'ihu 5 Mpx na olu ogbugba olu mara mma na nyocha ncha
Rear igwefoto 13 Megapixels nwere okpukpu abụọ FlasLED na Exmor CMOS sensor with a fotper aureture 2.0
Njikọ 2G-3G-4G-DualSIM-Bluetooth 4.0-GPS-aGPS na FM redio
Nanị atụmatụ Ultra Battery Saver - Ihuenyo - Wide Touch - Smart Njikere - Mmetụta ihuenyo - Smart Scene - Ndenye Snap
Akụkụ 72'6 x 152'6 x 7'99 mm
Ibu ibu 150 grams
Ahịa 135'69 Euro na ego 37%
Ihe kacha mma nke Lenovo K3 Rịba ama
Kasị mma anyị nwere ike ịza ajụjụ Lenovo K3 Cheta, Obi abụọ adịghị ya bụ ọnụ ahịa mkpọsa dị ịtụnanya ebe ọ bụ naanị maka naanị 135 euro anyị ga-enwe ọnụ site na akara amaara niile dị ka Lenovo nwere njiri mara nke enweghị ikikere na nkọwapụta ọrụ aka nke nwere ike iwere dị ka ọnụ ahịa gam akporo dị elu.
N'aka nke ọzọ, otu n'ime ihe ndị masịrị m banyere Lenovo K3 Note a, bụ nnukwu obodo gam akporo n'azụ ọdụ a, nke ga-eme ka anyị abụọ nwee Mgbọrọgwụ Lenovo K3 Rịba ama otu esi etinye TWRP Iweghachite na enwe ike igbanye Rom na n'ụzọ dị otú a, dịka ọmụmaatụ iji nwee ike melite ya na gam akporo 5.1 mediante Nri esiri esi na rom ọhụrụ Lenovo enyere ichebe ma ọ bụ ọbụna inweta na arụmọrụ ọhụrụ. Nke ikpeazu, ma usoro mgbọrọgwụ na ntinye nke TWRP Iweghachite na mmelite ya na gam akporo 5.1, m ga-egosi gị nkuzi nkuzi n'ọdịnihu nke m na-akwado.
Maka ihe kachasị mma anyị nwere ike ịchọta na Lenovo K3 Note a, anyị nwere ike ichikota ya na isi ihe ndị a:
Mmetụta IPS FullHD ihuenyo.
Super ngwa ngwa asatọ-isi processor na 64-bit technology.
GPU karịa iji kwaga ọtụtụ egwuregwu gam akporo.
2 GB nke Ram.
Nkwado maka kaadị SD.
Igwefoto dị n’èzí, ma ese foto ya n’ihu ma n’azụ.
Anabatara igwefoto mma n'ime ụlọ na obere ọkụ ekele ya ike abụọ FlashLED.
Enwere ike ịgbanye ya ma wụnye TWRP Iweghachite.
Ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ agbakwunyere.
Batrị mAh 3000 na - ewepu ewepu nke na - enye anyị ohere ime ihe dịka ihe dị ka 18/20 awa were were ihe were awa 4 were rụọ ọrụ.
Ihe kacha njọ nke Lenovo K3 Rịba ama
Kasị njọ na-enweghị obi abụọ banyere nke a Lenovo K3 Cheta, ọ bụ ezie na iji ngwọta dị mfe site na ịwụnye APK dị mfe ma ọ bụ na-egbu maramara Lenovo Rom nke dabere na nrụpụta 1526, ọ bụ enweghị obi abụọ. ya obere olu ike. Ike na-esighi ike, ọbụlagodi ihe m nwetaworo site na igbe ya, ọ bụ ezie na m kwuru, m ga-akuziri gị idozi nke a site na ịgbanye njedebe ahụ, ịwụnye TWRP na imelite onye ọrụ Android 5.1 site na Rom esiri ya ma kachasị nke kachasị maka Lenovo K3 Note a.
Echiche nke Editor
Lenovo K3 Rịba ama K50-t5
Ọnụahịa a na-apụghị imeri emeri na nso ya
IPS FullHD ihuenyo
Nka nka na ụzụ
Atụmatụ Lenovo pụrụ iche
Olu olu dị ala
Enweghị njikọ NFC
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Lenovo » Nyochaa nke Lenovo K3 Rịba ama, Octa Core 64-bit na 2 GB nke RAM naanị 135 Euro
Ihe 82 kwuru, hapụ nke gị
Mmeghe m chọtara Lenovo bụ akwa mkpuchi ya, ọ jọgburu onwe ya.
Ihe ngwọta dị mfe dị ka egosiri na nyocha vidiyo, site na ntinye nke ngwa ngwa gam akporo ị nwere azịza dị mfe ma ị nwere ezigbo ọnụ maka obere ihe ọ na-efu, dịka ọmụmaatụ, Moto E 2015.
You nwara n'ezie ịwụnye launcher? Enwere m ya na agbalịrị m ịwụnye ụfọdụ n'ime ha ma ọ na-enye m njehie mgbe m na-achọ ịhazi wijetị ọ bụla ...
CARLOS DELFINO dijo
Ndewo FRANCISCO Enwere m LOVOVO K3 M Zụrụ ya na CHINA NA Mmanya na Spanish mana ọ rịọrọ m maka mmelite m mere ya na ọ tinye ya niile na China weghachiri ya site na ụlọ ọrụ na-enye m nhọrọ abụọ n'otu na China na ndị ọzọ na China. NA ENGLISH Ọ dịghị ihe SPANISH Ihe m nwere ike ime
Zaghachi CARLOS DELFINO
Wiston Gonzalez Lesscal dijo
Nnọọ, kedu ka ị mere. Ọ dị m ka ezigbo ama mara mma, mana ajụjụ m bụ ma ọ bụrụ na m weta ya ebe a na mba m, Ecuador, ọ ga-enwere onwe ya iji rụọ ọrụ na ndị ọrụ ekwentị ọ bụla? Nyere m aka na nchegbu a.
Zaghachi Wiston Gonzalez Menoscal
Kpamkpam free iji ọbụna na abụọ dị iche iche rụọ.
Ọ na-eweta bandị LTE nke 800?
Ndewo, kedụ oge o were gị iji nweta ekwentị mkpanaaka gị?
Zaghachi ka eji egwu egwu4
Maka mbufe ahia, ya bụ, na-enweghị ụgwọ mbupu ma ọ bụ omenala gbasara ụbọchị 15 ma ọ bụ 16. DHL ma ọ bụ GLS mbupu na-ewe ihe dị ka ụbọchị 5 ma ọ bụ 6 ọ bụ ezie na a ga-akwụ ụgwọ na mbupu na ụgwọ omenala.
Gustavo Vichetti dijo
Hi Francisco: Enwere m lenovo k3 mana ọ bịara na ntuziaka na Chinese. Ebee ka m nwere ike nweta otu na Spanish?
Zaghachi Gustavo Vicheti
Ndewo nụ ụtụtụ. Anọ m na-achọ ezigbo mobile na ezigbo ọnụahịa maka oge na eziokwu bụ na ịhụ nyocha gị, Lenovo a masịrị m nke ukwuu na akụkụ abụọ a. Mana enweghị m ahụmịhe n'ụdị ụdị ịzụ ahịa n'ịntanetị. Nzụta izu ị hapụrụ n'elu n'isiokwu a, A na-atụkwasị obi mgbe niile? Ana m ekele gị nke ukwuu na ekele.
Diego alvarado dijo
na Linio dị na ọnụahịa dị mma ...
Zaghachi Diego Alvarado
Ndewo Francisco Ruiz, ajụjụ, ọ bụrụ na ị na-eji ụgbọ mmiri ụbọchị 15, ị naghị akwụ ụgwọ omenala?
N'ihi na tupu
Dị ka iwu n'ozuzu, anaghị edebekarị ya na omenala, ọ bụ ezie na enwere mgbe niile na-akwado iwu ahụ.
Ndewo, ekwentị dị mma na ahịrị ndị dị na Argentina
nke amador dijo
Ekele m, enwetara m smartphone nke ihe nlereanya a n'oge na-adịbeghị anya, achọpụtara m na mgbe m gbanwere asụsụ gaa na Spanish, ọ bụrụ na m chọrọ ịgbanwe font, a ka na-edepụta mkpụrụ edemede n'asụsụ Chinese: Ọ bụ nkịtị? Aga m agbali ime usoro ị kpọtụrụ iji meziwanye ya, ọ ga - ekwe omume idozi nsogbu ndị a site na itinye usoro ịkekọrịta? Daalụ.
Zaghachi Iveth amador
Ndewo Francisco, enwere m ajụjụ na ọnụ ọnụ a ma ọ bụ n'ihi na ọtụtụ ndị ọrụ nke sọrọ sim mobile forum nwere kọọrọ nsogbu na mmetụ ahụ mgbe akpachara xancin roms gbachapụrụ agbachapụ, ọbụnakwa ụfọdụ na-emetụ aka kpamkpam, yana dịka m hụrụ n'otu n'ime gị vidiyo, ị na-eji otu n'ime roms ahụ, ọ ga-amasị m ịmara ahụmịhe gị na mkpanaka ahụ. Ekele na ekele m.
Enweghị ụdị nsogbu enyi, ọ bụ karịa, oge ọ bụla ọ na - arụ ọrụ nke ọma na ndị Rom nke Xancin.
Ndewo Daniel, achọrọ m ịma ma ị ghala asụsụ ahụ, n'ihi na azụrụ m ekwentị ahụ na ihe na-apụta n'asụsụ Bekee na Chinese n'agbanyeghị asụsụ ahụ dị na Spanish, ọ bụrụ na ọ bụ na ị chọghị ịkpọtụrụ m, nke a bụ email m: mario.mendoza.info2@gmail.com
Morningtụtụ ọma Francisco, abụrụ m ọhụụ na ọgbakọ ndị a ma achọrọ m ịma ma Lenovo a ọ na - arụ ọrụ na ndị agha ndị a na Dominican Republic:
GSM / EDGE 900 MHz / 1800 MHz / 1900 MHz
GSM / EDGE 850 MHz / 1900 MHz
Ezigbo mma nyocha.
Ndewo Francisco, ajụjụ; Na m K3 Rịba ama, ihe ọkpụkpọ vidiyo abịaghị na ndabara, ọ nwere ike ịbụ?
Kedu ka m ga-esi gboo ya? Gs.
Ọgba aghara dijo
M na-adị ndụ nwoke Cali Colombia, achọrọ m mkpuchi mkpuchi ebe m nwere ike inweta ya na mba m
Ndewo Francisco, enwere m ajụjụ, achọrọ m ịma ma ekwentị k3 ahụ nwere asụsụ Spanish (Argentine), n'ihi na m gụrụ na ọ nweghị ya ma ọ bụ na ọ na-arụ ọrụ na akụkụ na Spanish.
ọ bụla dijo
Ndewo Francisco Kedu otu m ga - esi azuta na enweghi ahia mbu na ahia ahia n’ofe peeji? Ọ na-arụ ọrụ nke ọma na Argentina?
Zaghachi ọ bụla
Azutara m ya na aliexpress mana azoputaghi gi na ahia ndi Argentina !! N'otu aka ahụ, tel a na arg ga-efu ihe karịrị $ 15.000 maka aliexpress, ọ na-ahapụ $ 3.000 na mmefu niile.
Gustavo. Arg dijo
Azutara m ya na aliexpress mana azoputaghi gi na ahia ndi Argentina !! N'otu aka ahụ, ekwentị a na arg ga-efu ihe karịrị $ 15.000, maka aliexpress ọ na-efu $ 3.000 na mmefu niile
Alan Derudi dijo
Kedu ka ị mere? Gustavo, m nyere ya iwu n'aka Deal Extreme, ị nwere ike ịgwa m na ha gwara gị ka ị bulie ya na kọstọm? i kwesiri igakuru Ezeiza? Osisi!
Zaghachi Alan Derudi
Ndewo, ị nwere ike ịzụta n'ụlọ ahịa anụ ahụ na Seville? Ihe ozo, achoro m ya ka o tinye ihe odi egwu, n'ihi na abum onye trombonist ma aghaghi mdekọ onwe m maka ule na ndi di otua, achoro m ka uda ghara ijuju, m ga enwe nsogbu na ekwenti a?
Alberto, ajuo m ajuju. Ndị otu ahụ na-arụ ọrụ gị nke ọma na Argentina… ??? Ana m ekwu ya maka ndị agha !!!
Ihe kachasị mma na mmekọrịta ọnụahịa, mgbe ị wụnye xancin ROM ọ naghị ajụ ihe ọ bụla site na njedebe dị elu, kwadoro na 100 ị ga-agbanwe lenovo ROM
Echere m na m na-agbanwe rom dị ka ị na-ekwu, ma olee uru nke a ga-ewetara m kpọmkwem? ekele
Ndewo, lee ha na-ere ya na euro 135 mana ahụghị m ebe nhọrọ ịzụta ya bụ, ọnụahịa a enweghị mbupu?
Enweelarị m njikọ ahụ ịzụta ya, nzụta bụ ebe ị nọ?
ha na-ebu ụgbọ mmiri ebe ọ bụla n'ụwa?
Ọrịre ahụ sitere na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị pụrụ iche nke na-enye nkwa niile ma n'ezie ha na-ezigara ya n'akụkụ ọ bụla nke ụwa. http://www.everbuying.net/product895278.html
Nnọọ. Azụtara m ekwentị ahụ na aliexpress ma enwere m nsogbu na enweghị m ike ịwụnye gị ụlọ egwuregwu. Ọ wụnye ma mgbe m chọrọ imepe ya, ọ na-atachi anya ma na-emechi.
Mmadu enwere ike inyem aka. Daalụ
Ma Storelọ Ahịa Play adịghị abịa na ndabara arụnyere na ụlọ ọrụ mmepụta ihe? Olileanya mmelite nke Lenovo kwuru banyere gam akporo 6 Marshmallow na-akawanye mma ...
Ekwentị jọgburu onwe ya, ihe ọ bụla mara mma dị njọ, m na-arịa ọrịa nke mgbasa ozi, nje, ihe nzuzu ndị China, na-ahapụ ekwentị ahụ n'abalị ma na-achọta ya n'ụtụtụ na-agbanye yana na ngwa arụnyere, na ọ na-amalitegharị mgbe ọ dị gị ka ọ dị, na na o nwere ọtụtụ ngwa / nje na-agaghị ekwe omume iwepụ, dị nnọọ njọ zuo na mere.
Ndewo, azụrụ m ekwentị a mana ebe m bi, enwere naanị 2G na ebe ole na ole enwere 3G ya mere na enweghị m mgbaàmà. Onye ọ bụla maara otú m ga-esi nwee mgbaàmà.
Luis ị ga-emelite ya, jiri mmelite ekwentị zuru oke ma na-enweghị mgbasa ozi ndị China, ekwentị a ga-ere ahịa na China, ị zụtara ya na ụlọ ahịa ndị China, chọọ ozi, ọ dị mfe imelite ya ma gbanwee ROM.
Fransisco Achọrọ m ịzụrụ otu maka enyi m nwanyị, ọnwụnwa a nke inwere na ibe a na-ekwupụta, ọ dị mma?
Ndo, edere m ihe ọjọọ nke ukwuu, na keyboard ọhụrụ a, amaghị m etu esi ede ajhaha
Ndewo Francisco, ajụjụ, n’etiti nke a na Lenovo p70 nke kedụ nke ị na-ewere ka ọ ka mma? Daalụ!
Azụrụ m ọdụ abụọ na saịtị ntanetị dị iche iche nke kno kno. Enwere m nnukwu mmechuihu. Olu dara ụda, ọ bụghị ngwa ngwa ka ha na-ekwu, na-edekọ ihe na-adịghị mma ma ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere samsung. Ihe ojoo ojoo, otutu uzo anya na akuku. Ihuenyo dị mma. Ahụigodo dị mma. Oge ụfọdụ m kpọrọ ya ọ kpọọ na nke ya
Ihe kacha njọ na nke a dị njọ. Na mpaghara arụ ọrụ na ihuenyo na ugboro abụọ ọ bụla mpaghara ahụ gburu. Mgbe ụfọdụ enweghị m ike ide ma ọ bụ ihe ọ bụla. Nke a na-eme m na ederede K3 abụọ.
Nakwa ọtụtụ mgbasa ozi na-akpasu iwe. Zingtụnanya.
Kedu nke na-eme! Azụrụ m cell ahụ na amazon, njirimara niile dị na nyocha ahụ dị oke mma ma dị oke mma, naanị ntụpọ bụ na mgbe obere oge mgbasa ozi na-ewe iwe malitere ịpụta, mana enwere ike idozi ya site na ịwụnye ROMS, nke dị ezigbo mma na ọbụlagodi imelite gị na 5.1 , na-ewepu mgbasa ozi, ịtụgharị x zuru ezu gaa na Spanish, na-eme ka ụda ahụ dịkwuo mma, nde ndị ọzọ. Nke a ekele ndị enyi nke movilesdualsim na pụrụ iche Xancin.
Ihe dị ka ọnwa 8 gara aga azụrụ m lenovo k3 note, eziokwu ahụ dị m ezigbo otu otu n'ihe gbasara arụmọrụ na uru ma e jiri ya tụnyere ọnụahịa ya.
Naanị ihe ọjọọ bụ na ihe dịka otu ọnwa otu ihe ahụ ị kọwara na nkọwa a na-eme m - na mpaghara ihuenyo (n'akụkụ aka ekpe - elu) oge ọ bụla ọ na-egosi onwe ya na ekwentị na-arahụ na ị nweghị ike ide nke ọma ma ọ bụ mgbe a na-agụ ihe ederede ederede naanị n'akụkụ a, na-ewe iwe. Ọzọkwa mgbe ị tinyere nzụlite dị ọcha n'akụkụ a nke ngebichi ị ga-ahụ ihe mmado edo edo.
Ọ ga-amasị m ịmara ma ị ga - eji ngebichi dozie nsogbu ahụ
Federico Giulio D'Ostuni dijo
Otu ihe nke ekwentị a na-enweghị bụ gyroscope ngwaike nke nwere nnukwu ihuenyo mgbe ụfọdụ itinye ya na mbara ala bara uru.
Zaghachi Federico Giulio D'Ostuni
Ndewo Arturo, dị ka enyi Wiston si kwuo, chọọ ozi na movildualsim ma gbanwee rom ị ga-ahụ na ọ ga-arụ ọrụ zuru oke ma mgbasa ozi niile ga-apụ n'anya, ekwentị a mere maka China, ị ga-emelite ya.
Cheregodi, azụrụ m lenovo k3, ọ na-amata na Argentina maka ugboro ole ahụ?
Enweghị m ike iji ya
Ndewo Francisco, Achọrọ m ịma otu esi edezi wijetị nke anya abalị pro. pịa gbasawanye, nseta ihuenyo ... Ọ ga-amasị m ịnwe ụda na ịma jijiji iche iche ka ị na-eme. Daalụ
Biko, zaanụ m na mbubata a, nke bụ ebe m debeere email m nke ọma ka m wee hụ ọsịsa gị. Daalụ
Ọ ga-amasị m ịmata ma ekwentị a na Rom ọhụrụ, yana otu o si arụ ọrụ na-enweghị agbanwe ihe ọ bụla, ebe ọ bụ na ekwentị ikpeazụ m zụrụ UmiX2 na-agba mbọ ịgbanwe ya, ma ugbu a ọ bụ brik, agaghị m atụfu wepu ego ozo
Ndewo ọzọ, m ga-achọ ịma ihe ị chere gbasara okwu a: ọ bụ n'echiche m na okwu a na-echere maka igwe okwu ndị China niile a bụ inwe nhazi nke Rom dịka obodo a ga-ere. Echere m na nke a ga-agụnye ọtụtụ ọrụ, mana ọ bụrụ na ụdị niile a na-ere na Spain nwere ike, gịnị kpatara China. Ọ gwụla ma ha rere ya ahazi maka kọntinenti ọ bụla, mana ọbụnadị nke ahụ. Kedu ihe kpatara m ji chọọ ekwentị nwere njirimara niile nke ekwentị ma ọ bụrụ na ọ naghị akpa agwa dị ka Spain ebe a?
Ndewo, achọrọ m ịgwa gị gbasara nsogbu mụ na Lenovo m nọ na nso nso a na ọ bụ na mgbe ha zitere m WhatsApp dịka ọmụmaatụ ọ dịghị ada ma ọ nweghị ihe sitere na WhatsApp pụtara ruo mgbe m mepee ngwa ahụ ka m wee chọpụta ọtụtụ ihe mere na ekwentị m adịghị ada ụda ma achọrọ m ịma ma ịgbanye ya na ịwụnye ụlọ ọhụrụ ahụ ga-edozi nsogbu m
Zaghachi na koke
Otu ihe ahụ na-eme m, ị jisiri ike dozie ya? Ọ bụrụ na ị nweta ya, biko gwa m.
Jesus Morgado dijo
Ọ na-emekwa m mgbe m nwere ya, m na-ahụ ndị ọzọ dere ya na-agbakọ
Zaghachi Jesus Morgado
Ndewo Francisco: Ana m ekele gị nke ukwuu maka enyemaka gị. Emere m ihe niile ị tụrụ aro ma ugbu a ekwentị na-arụ ọrụ dị ka amara !!!!!
,Da, Video, Igwefoto, Nchọgharị, ihe niile dịkwa mma. Nnọọ, ekele
(Ọ ga-abụ naanị ka m rịọ gị ka ị kwado m, ụdị ụdị nchebe na mmezi iji.)
Azutala m Lenovo K3 Rịba ama, Enwere m ọtụtụ nsogbu….
-Emegheghị Storelọ Ahịa Play
Emeela m asụsụ ahụ na Spanish na ọtụtụ ngwa na akara ngosi na-aga n'ihu ịpụta na Bekee na Chinese.
-Ndị bu ụzọ Sony akaụntụ m nwere ka nwere njikọ.
- Agbalịrị m ịwụnye whassap site na google play na ọ na-ekwu na arụnyere ya, na etinyeghị ya na Lenovo.
Amaghị m ma m na-akọwa onwe m, ị nwere ike ịhụ na amaghị ihe m zuru oke na okwu a.
Francisco, ị nwere ike inyefe m rom nke ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ a na-eweta, nke nwere ọtụtụ asụsụ?
Lola sancho dijo
Ebee ka m nwere ike ịzụta ya na ọnụahịa ahụ?
Zaghachi Lola Sancho
Hi Ramon, Enwere m otu ajụjụ ahụ ị nwetara ama
Zaghachi ka daestdigo
Emechara m zụta T3s ebe nke ọzọ adịghị na ngwaahịa.
Jaklyn Bermúdez Guzman dijo
Ehihie ọma. Enwere m lenovo k3 ederede m na-eme nke ọma agbanyeghị n’ihe dịka ọnwa 3 ọ malitere nwayọ. Amaghim ma obu RAM. Ọzọkwa mgbe ụfọdụ mgbe m pịnyere na ọ chọghị ịrụ ọrụ ma ọ nweghị ihe a ga-ede. Amaghị m ma imelite ya na marshmallow n'ihi na enwetala m ọkwa ọkwa mmelite. Batrị ahụ nwekwara ụdị anaghị adịgide mana achọpụtara m na fb na-ewetu batrị ahụ. Ma agbanyeghị. Echiche ọ bụla gbasara mmelite ahụ?
Zaghachi Jaklyn Bermúdez Guzmán
Otu ihe a na - eme m na m na - etinye nhọrọ ndị nrụpụta nke na - enye nhọrọ iji gosi pointer ebe ị pịrị ma mgbe ụfọdụ ha na - apụta dị ka akara pointer atọ naanị ya anaghị aga wee dee wassap fatla mgbe ụfọdụ
Hoka, ị nwere mkpuchi 4G site na vodafone na ekwentị a?
Manuel Moral Lopez ebe obibi dijo
Ndewo Francisco, olee ihe dị iche na K50 T3S na K50 T5 ebe ọnụahịa ahụ dịgasị iche banyere € 30
Zaghachi Manuel Moral Lopez
Ndewo Francisco. Nwere ike biputere njikọ ebe ị nwere ike ibudata ma ọ bụ lelee ntuziaka ntuziaka maka akwụkwọ Lenovo K3 ma ọ bụ, na-ada nke ahụ, K50-t5 / K50-a40 ... ebe ọ bụ na nke m zụtara n'ịntanetị na-abịa na Chinese?
Daalụ maka onyinye ọrụaka gị.
Junior leon dijo
Ndewo Francisco, Achọrọ m ịma ma k3ts na k50ts bụ otu ihe ma ọ bụrụ na ha bụ otu ndị nrụpụta ma ọ bụ na enwere mgbanwe na lenovo k50ts ma ọ bụ k3ts 🙁
Zaghachi Junior Leon
Nnọọ. Na Lenovo K3 m nwere nsogbu na WhatsApp, ọ naghị edekọ olu (ana m enyo na ihuenyo na enweghị ike ịhazi onye na-edekọ ihe n'oge a)
Onwere onye maara ka esi edozi ya? Enwetala m ya ma weghachite ya ma ọ ka dị otu.
Ndewo Francisco, Achọrọ m ịma ma k3ts na k50ts bụ otu ihe ahụ ma ọ bụrụ na ha bụ otu ndị nhazi ahụ ma ọ bụ na enwere mgbanwe na lenovo k50ts ma ọ bụ k3ts, ọdịiche dị n'etiti K50 T3S na K50 T5 ebe ọnụahịa ahụ dịgasị na Colombia
Ndewo ezigbo, enwere m obi ụtọ na lenovo k3 note karịsịa mgbe gbanyechara ya mana enwere m obere nsogbu na ọ bụ na micro anaghị ekwe ka etinye ya na map google ma ọ bụ na ngwa ọ bụla ọzọ, naanị na whattsap, ị nwere ike inyere m aka ? Daalụ
Zaghachi na sergiocuenca
Enweela m ezigbo ntụnyere na YouTube banyere ụkpụrụ Wifi na m na-ahọrọ Bluboo Xtouch na nke ahụ.
Nwere ike ịchọta ya na YouTube na "wifi standars wifi ọsọ"
N'ehihie, ahụrụ m na nkwupụta ndị gara aga na enwere nkuzi ma ọ bụ ntuziaka maka otu esi edozi nsogbu asụsụ na ọdụ a. Nwere ike ịgwa m ebe m nwere ike ịchọta ozi a? M zụtara ngwaọrụ a n'oge na-adịbeghị anya na ọ na-esiri m ike inwe asụsụ atọ n'otu oge, ọkachasị Chinese, nke m na-anaghị aghọta xD. Daalụ n'ọdịnihu.
Obi dị m ezigbo ụtọ na Lenovo k3 Cheta. Enwere m mmasị na ọsọ ya, fluidity, ọ nwere ezigbo igwefoto 13 MP nwere ọkụ ọkụ, igwefoto dị ezigbo mma na imewe mara mma. Ọ dị ezigbo mma ebe ọ bụ na nnukwu ibu ya dị elu karịa 5,5-inch. Obi dị m ụtọ!
Zaghachi na electronicosjc
Ihe ndekọ m lenonovo k3 anaghị arụ ọrụ nke ọma, igwefoto na-ewe foto na-agba agba ma na-agba ọsọ, ụfọdụ emeela ya ...
Zaghachi Maleja lozano
Dị ọcha na na! Ọ na-ewe Chinese ROM na Chinese App na aka bụ kearu. Abughi m mgbọrọgwụ ma akpọrọ m Lenovo na ebe ha anaghị ere ya ebe a, ha agaghị elekọta ya. Ọnụ ọgụgụ 0 na agaghị m azụta Lenovo ọzọ. Ndị ohi!
Onyinye adami (@ marhoa24816) dijo
Taa, enwetara m ekwentị m, azụrụ m ya site na AliExpress, m ga-agbakwunye na o juru m anya na ọ naghị eweta ngwa China ọ bụla, OS bụ gam akporo 5.0, ya bụ, ezigbo gam akporo.Eziokwu bụ na m bụ afọ ojuju na m azụta.
Zaghachi nye marco ramirez (@ marco24816)
Ọ bụrụ na mmadụ nwere ike ịgbanwe asụsụ ị na-asụ Spanish biko bipụta ya. Daalụ
Azụtala m K3 abụọ na ihe anyị na - agaghị emeli bụ oku na memos si na watsap. Nwere ike ịgwa m ihe m nwere ike ịme?
Jose Sepúlveda dijo
Obi dị m ezigbo ụtọ !! Azụrụ m ya maka linio ihe na-erughị otu ọnwa gara aga, ha enweela ezigbo mma nke ukwuu, dịka ọmụmaatụ, ana m agwa ndị nwere mmasị:
-Ọ dịghị junk ngwa
-Ọ dị na ọkwa gọọmentị na Spanish
Zaghachi José Sepúlveda
Neffy lozano dijo
Ndewo, kedu ka ị mere, enwere m ihe dị ka afọ 1 na ọnwa .. na lenovo k3 note.
Ugbu a, ọ na - eji nwayọ nwayọ, ọ na - ewe iwe ọkụ na ọpụpụ ... agbanweela m chaja, batrị ya ka dịkwa otu ... kedụ ihe ọ ga-abụ ???
Zaghachi Neffy Lozano
5 Nexus 2015 enweghị atụ na AnTuTu
Nokia na-acho onye na emeputa ugwu a ma ama na ugwu uwa nile maka nloghachi ya